Lọ Ọrụ Mmepụta - Yuyao Jera Line Fitting Co., Ltd.
Jera na-etinye onwe ya iji nweta ohere nke iweta na n'ichepụta ngwaahịa zuru ezu na nke a pụrụ ịdabere na ya maka azịza netwọk mmekọrịta. Ọ na-akpali anyị oge niile iji mepụta ma melite ikike anyị nwere imepụta ihe. Jera na-eji teknụzụ mmepụta ọgbara ọhụrụ, usoro nhazi ihe eji eme ọnụ na ngwa ọrụ akpaaka iji nweta nrụpụta dị elu dị elu.
Factorylọ ọrụ Jera nwere ikike nke mita 2500, ejirila ọtụtụ ngwa ngwa ngwa eji arụ ọrụ kwa ụbọchị.
Jera nwere ulo oru 10 nke nwere teknụzụ kwekọrọ:
1) eriri optic cable omumuihe
2) Plastic ịkpụzi ogbako
3) Pịa akpụ ogbako
4) Helical waya akpụ ogbako
5) Production ngwaọrụ ogbako
6) machinelọ ọrụ CNC center center
7) CNC lathes ogbako
8) Aluminium na zinc anwụ mgbatị ogbako
9) processinglọ ọrụ nhazi ígwè
10) Nzukọ ogbako ngwaahịa
Usoro Jera na-arụ ọrụ dịka ISO 9001: 2015, nke na-enye anyị ohere ire karịa mba 40 na mpaghara dịka CIS, Europe, South America, Middle East, Africa, na Asia. Site nọgidere mma anyị mmepụta ụlọ ọrụ na-eme ka anyị na-ọzọ asọmpi na ike inye ndị ọzọ nwere ezi uche na-enye na elu àgwà ahịa anyị.
Jera na-agba mbọ ịnye ọnụahịa ziri ezi, mma obi ike, mmepụta ngwa ngwa na ọrụ OEM ndị ahịa anyị, biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị, ebumnuche anyị na-agba mbọ iwulite mmekọrịta nwere ntụkwasị obi na ogologo oge.